> Resource> iPod> Nyefee Music si iPod ka mpụga ike mbanye
Hi, Pụrụ onye ọ bụla biko gwa m ma ọ bụrụ na ọ bụ na o kwere omume ibudata music si m kpochapụwo na mpụga ike mbanye na ga nwebisiinka mbipụta-aka ikekwe ịkwụsị m nbudata niile music. Ọtụtụ n'ime ndị music bụ na nke m CD si. Ekele.
Mgbe ụfọdụ, ị nwere ebumnuche nyefee music na gị iPod ka mpụga ike mbanye maka ndabere. Mgbe ahụ, mgbe ị na-a ọhụrụ kọmputa, izute a kọmputa okuku, ma ọ bụ hapụ music na gị iPod, ị nwere ike nweta music azụ na kọmputa na-iPod na oge. Iji nyefee music si iPod ka ike mbanye, i kwesịrị enyemaka ụfọdụ. Lee ebe a: Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Nke a na usoro na-enye gị ohere iji nyefee họrọ ma ọ bụ niile music na gị iPod ka mpụga ike mbanye enweghị mgbalị.
Download nri version nke TunesGo na kọmputa.
Cheta na: Ma Windows version na Mac version nkwado iPod emetụ na-agba ọsọ iOS 9, 8, 7, 6 na 5, iPod kpochapụwo, iPod aka na iPod ịkpọgharịa. The Mac version anaghị akwado iPod aka 3. N'ebe a, m na-enye gị dum na-akwado iPod ụdị na-akwado iOS.
Nyefee music si iPod ka mpụga ike mbanye mfe
Aga m na-egosi gị otú ị idetuo songs si iPod ka mpụga ike mbanye na Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ). Mac ọrụ pụrụ ịgbaso yiri nzọụkwụ mezue music nyefe.
Ugbu a, wụnye a usoro na kọmputa gị. Ẹkedori ya iji na-enweta window dị ka screenshot-egosi n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod na mpụga ike mbanye na kọmputa
Jiri USB Gịnị jikọọ ma gị iPod na mpụga ike mbanye na kọmputa. TunesGo ga-amata ma na-egosi gị iPod ke akpan window ozugbo. Ọ bụrụ na gị mpụga ike mbanye achọpụtara site na kọmputa gị, ị nwere ike ịhụ na ọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iPod music ka mpụga ike mbanye
Na ala akara, pịa "Export Music ka nchekwa". Mgbe ahụ, ahụ mpụga ike mbanye ma nyefee music na ya.
Ma ọ bụ, na-agbalị otú a. Pịa "Media" ke hapụrụ sidebar. Na-emekarị, na music window egosi elu na nri. bụrụ na ọ bụghị, pịa "Music" n'elu akara na-music window. All songs na gị iPod na-egosipụta n'ebe ahụ. Họrọ songs ị ga-amasị nyefee. Mgbe ahụ, pịa "Export ka".
Mgbe ndọpụta ndepụta na-egosi, chọta mpụga ike mbanye ma họrọ a nchekwa ịzọpụta iPod music. Mgbe ahụ, nke a music transfer usoro amalite. Jide n'aka gị iPod bụ ejikọrọ iso usoro-abịa na njedebe.
E wezụga na-ebufe music faịlụ, ị nwekwara ike nyefee playlist ka mpụga ike mbanye. Na playlist window, pịa "Playlist" ikpughe niile listi ọkpụkpọ na nri ebi ndụ. N'otu aka ahụ, họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa "Export ka". Agagharị na kọmputa gị ruo mgbe ị na-ahụ mpụga ike mbanye. Mgbe ahụ, nyefee playlist na ya.
Gbalịa Wondershare TunesGo idetuo iPod music na mpụga ike mbanye.
Na-ekiri ndị Video Ka idetuo Music si iPod ka mpụga ike mbanye
Olee otú Naghachi Music si iPod ịkpọgharịa
Olee otú mmekọrịta Photos ka iPod